မရဲတရဲနဲ့ရေးကြည့်လိုက်တာပါ – လူထုစိန်ဝင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မရဲတရဲနဲ့ရေးကြည့်လိုက်တာပါ – လူထုစိန်ဝင်း
မရဲတရဲနဲ့ရေးကြည့်လိုက်တာပါ – လူထုစိန်ဝင်း
Posted by kai on Mar 6, 2012 in Copy/Paste, Opinions & Discussion |9comments
“—မီဒီယာကို ချုပ်ကိုင်ဖို့ ရေးဆွဲတဲ့ ဥပေဒကို မီဒီယာသမားတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပေးကြတယ် ဆိုတော့ တော်တော်အံ့သြမိတယ်။ သတင်းမီဒီယာသမားစစ်စစ်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား လို့လည်း အတွေးရောက်မိတယ်။ ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မယ့် ကြိုးကွင်းကို ကိုယ်တိုင် ၀င်ကျစ်ပေးတာနဲ့ မတူဘူးလား—”
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌသူရဦးရွှေမန်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ရာမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥကဌက၀န်ထမ်းတွေလစာတိုးပေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဘာကြောင့်တင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့တယ်။
ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်၊တိုင်းသူပြည်သားများကိုချုပ်ကိုင်ဖို့ချမှတ် တာဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကလူတွေကိုတုတ်နှောင်ထားတဲ့ နှောင်ကြိုးအားလုံးကလွတ်ကင်းရေးဖြစ်တယ်။သတင်းသမားမှန်ရင်ဘယ်လိုချုပ်ပိုင်မှုမျိုးကိုမဆိုဆန့်ကျင်ရမယ်။ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကို နှောင်ကြိုးတည်းတဲ့ ဥပေဒတွေကို ပယ်ဖျကပြီး မရှိမဖြစ်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေတွေကိုသာ ထားရှိ ကျင့်သုံးရမှာ ဖြစ်တယ်။ သတင်းမီဒီယာကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မတွေ အခုကို မနည်းလှပါဘူး။ တချို့က မလှုပ်သာ မရှက်သာအောင် တင်းကျပ်လွန်းလို့ ဖြေလျှော့သင့်ပြီး၊ တချို့ကျတော့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေလို့ လုံးဝဖျက်သိမ်းပစ်သင့်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ http://mratnaing.wordpress.com/2012/03/06/%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9/
ဆင်ဆာ အဖြုတ်ခံရတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ၀၅ – ၀၃- ၂၀၁၂ ထုတ် Weekly Eleven Journal အတွက် ရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုရေးထားပါသည်။
သဂျီး .. သဂျီး …
ကွန်မန့်ထဲမှာ အဲလို ပုံတွေ ဘီလို ထည့်ရသလဲဟင် …
အနော်က အိုင်အမ်ဂျီ အက်စ်အာစီ … ဘာကြာသာရကာ ဆိုပြီး ပုံထည့်တဲ့ ကုတ်နဲ့ ထည့်ကြည့်တာ ရဘူးရယ် …..
ပြီးတော့ စာလုံးတွေကို ကွန်မန့်ထဲ အနက်ခြယ်တာရော ဘီလိုလုပ်တာလဲဟင် …
ဒါလေးတွေ သိချင်နေတာလည်း ကြာပီဂျ …
ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်တော့လည်း အဆင်မပြေလို့ …….
အဟီး … သဂျီးက ချောတယ်နော် … (သဂျီးကို ဖားသော လေသံဖြင့်)
အဟီး … အနော့ကို ကြောကြနော် .. လို့ ..
ဘရာကြော် (ဦး) လူထုစိန်ဝင်း
ဘရာကြော် သဂျီး ..
ဘရာကြော် အဂ္ဂမဟာ ဖေ့စဘုတ်တော်ဂျီး …..
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းက သတင်းသမားတဦးအနေနဲ့ မီဒီယာဥပဒေကို ကန့်ကွက်သလို..
သတင်းဖတ်ရှုသူအနေနဲ့ အခုမှသာ သတင်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာ ဖတ်ရှု ဝေဖန်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အဆိုပါ လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ထောက်ပြ မှုတွေကို နှိပ်ကွပ်မဲ့ ဥပဒေတိုင်းကို ကန့်ကွက်ပါ၏.။ :angry:
ကျွန်တော့အမြင်ကတော့လုံးဝစာပေစိစစ်ရေး မထားရတဲ့မူကိုလက်မခံပါ။လွတ်လပ်ခွင့်ပိုပေးရမှာတော့မှန်ပါတယ်၊ဘုရင်မကောင်း၊ဘုရင့်အကြောင်းရေး၊မိဘုရားမကောင်း မိဘုရား အကြောင်းရေးခွင့်တော့ရှိရမယ်၊ဒါပေမဲ့ တာဝန်ခံနိုင်ရမယ်၊ခိုင်ခိုင်မာမာ အထောက်အထား ရှိရမယ်၊ပြနိုင်ရမယ်၊မဟုတ်ရင် အရေးယူမှူခံနိုင်ရ မယ်။
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ လဲ လုံးဝမရှိလို့ကတော့ရှိတာတောင် ဒီလောက်တိုနေ၊ရင်လျားနေတာ…. မရှိလို့ကတော့ဘရာစီယာတွေနဲ့သီချင်းဆို၊သရုပ်ဆောင်ကြမလားမသိ၊အနုပညာရှင်တွေက သူတို့ကိုလူငယ်တွေက လိုက်တုနေပါတယ်ဆိုလဲ မထိန်းကြဘူး၊အမျိုးသမီးတွေ ပိုဆိုးတယ်၊ ကိုရီးယားကားတွေ တော့လွှဲမချနဲ့၊
သူတို့က အဲဒါတွေလိုက်တုမဝတ်ပဲနေရင် လူငယ်တွေ ဒီလောက် ဖေါ် မလာဘူး။
ကျွန်တော့် အမြင်ပြောကြည့်မယ်နော် ..
စာပေစီစစ်ရေးကို မထားတာပိုကောင်းတယ် လို့ လည်း ပြောမရသလို ထားရင် ကောင်းမလားဆိုတော့ ” အရင်က စလို့ ခုထိ ရှိနေတဲ့စာပေစီစစ်ရေးကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်လာ ရင်တော့ ထားထားသင့်ပါတယ် ” နောက်တစ်ခုတွေးစရာရှိ တာက တချို့နိုင်ငံတွေက ဘာလို့ စာပေစီစစ်ရေးတွေ မထားတာတုံး
ဘာဖြစ်လို့ စာပေစီစစ်ရေးမလိုအပ်တာတုံး ..
ဒါတွေကို ဆန်းစစ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေတွေရ ရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ..
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က နိုင်ငံ ဆိုတာကို ကုမ္ပဏီအကြီးကြီး တစ်ခု အနေနဲ့ မှတ်ယူပါတယ်. ..
နိုင်ငံတော်က အခွန်ကောက်တယ် .. ကုမ္ပဏီက .. ပိုက်ဆံယူ သလိုပေါ့ ..
ပြီးရင် ပြည်သူတွေ လိုအပ်တာ ကို လျှောက် လုပ်ပေးတယ် .. ကုမ္ပဏီက .. ပိုက်ဆံပေးတဲ့အတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေး သလိုပေါ့ ..
တကယ်လို့သာ ဒီကုမ္ပဏီက . ၀န်ဆောင်မှုတွေ မကောင်းဘူး .. အလကားအမြတ်ယူနေတယ်ဆိုရင် တော့ တခြားကုမ္ပဏီ ပြောင်းရမှာ ဘဲ .. ပြီးရင် တခြားကုမ္ပဏီက .. ဒီကုမ္ပဏီကို ၀ါးမြိုခိုင်းရမှာ ပါဘဲ . .. အဓိကကတော့ စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှု ပါဘဲ .. ဟီး .. ကျွန်တော် ပြောတာ .. လွန်နေရင် ချောတီး ပါဗျာ ..
Kyaw Thein says:
ရွှေပြည်သာကတင်မောင်ဦးဆိုတာက ငဖားကြီး ၊ဘာရောဂါမှမရှိဘဲတပ်ထဲကစောစောစီးစီးထွက်ပြီး
ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာ တကယ်ကို မရှိသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် မဟုတ်မဟတ်ကို လုပ်ကြံရေးမယ်ဆိုရင်လဲ ရေးတဲ့သူဟာ အပြစ်ပေးခံရသင့်ပါတယ် အဲဒါဟာ စာပေစိစစ်တာမဟုတ်ပါဘူး သူ့အပြစ် သူခံရတာပါ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ ရေးသားလိုက်မယ်ဆိုရင် အခြားတစ်ဖက်မှာလဲ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတရား ထိပါးခံရမှုတွေ ရှိနိုင်တဲ့အတွက် တကယ်လဲ အရေးယူသင့်ပါတယ်
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလဲ ဘယ်ဂျာနယ်၊ ဘယ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဘယ်သတင်းစာကို ဘယ်သူကတော့ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေမှုအတွက် တရားစွဲလိုက်တယ် လျှော်ကြေးဘယ်လောက်ပေးစေလို့ ဘယ်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို ခဏခဏ ဖတ်ရပါတယ်
ရေးသားမှုက အမှန်ဖြစ်မယ်ဆို၇င်တော့ မည်သူ့အကြောင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါစေ ရေးခွင့်ရှိကို ရှိရပါမယ် ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ သတင်းဆိုမှတော့ အထင်နဲ့ခန့်မှန်းရေးသားခြင်းမျိုး မဖြစ်ရဘူးပေါ့ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ရေးလိုတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ အသေချာသေးရင် မခိုင်လုံသေးရင် မရေးသေးနဲ့ဦးပေါ့ သေချာအောင် ခိုင်လုံအောင် အထောက်အထားတွေ ဆက်ပြီး ရှာဖွေရမယ်ပေါ့
အဲဒီလိုဖြစ်မှလဲ သတင်းရေးသားသူဟာ မမှန်မကန်သတင်း၊ မသေမချာသတင်းတွေကို မရေးရဲမှာ။ဈေးကွက်သတင်း၊ စီးပွားရေးသတင်း၊ ဖက်ရှင်သတင်း၊ အနုပညာသတင်းတွေက အစ နိုင်ငံရေးသတင်းတွေအထိပေါ့
အဲဒီအခါမှ ဖတ်ရသူ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်မှာပေါ့ အဲဒါမှပဲ သမ္မတသော်လည်းကောင်း ၊ အစိုး၇အဖွဲ့အစည်းသော်လည်းကောင်း၊ အနုပညာရှင်သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးသမားသော်လည်းကောင်း အခြားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် မဟုတ်တာ မလုပ်ရဲမှာ။ ဒါမှလဲ နိုင်ငံအပေါ် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု ၊ ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်မှုဟာ ပိုပြီးတော့ ပီပြင်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတွေကို ချမှတ်နိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်လျက်
ကျွန်တော် မသိလို့တစ်ခုမေးပါရစေ .. wikileak မှာရေးထားတဲ့ သတင်းတွေက လည်း အမှန်တွေ ပဲလို့ထင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အမေရိကန်က wikileak ရေးတဲ့ သူကို အသေအလဲလိုချင်ရတာလဲ .. ?
(မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး .. ဆိုင်အောင်လည်း သွားမတွေးလိုက်ပါနဲ့ နော် .. )